သင်၏ အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို မည်သို့ရပ်တန့်နိုင်မည်နည်း။ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2022 Douglas Karr
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော့်အတွက် မယုံနိုင်စရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ ပထမမြေးလေးအတွက် ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးဘက်မှာ၊ ကျွန်တော် အရမ်းလေးစားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရေး အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းကို တကယ်စတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအလယ်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်လိုင်းကိုလမ်းချော်ပြီး အလုပ်ခန့်ထားရတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်... အခုလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ဤထုတ်ဝေမှု၊ ချိန်းတွေ့မှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုတို့ကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ... ကျွန်ုပ်ဘဝသည် ယခု တိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင်သတိပြုမိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်၏ပေါ့တ်ကာစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ခေတ္တရပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ကျွန်ုပ်တွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရန်၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်၊ နှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က ပေါ့တ်ကာစ်3ခုရှိခဲ့သည်။ Podcasting သည် ကျွန်ုပ်၏ စိတ်အားထက်သန်မှု ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်၏ ဦးဆောင်မျိုးဆက်နှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ကြည့်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ချက်ချင်း ဝင်ငွေတိုးတက်မှုကို မပေးနိုင်သောကြောင့် ဘေးဖယ်ထားခဲ့ရသည်။ မိနစ် 20 ကြာ ပေါ့တ်ကာစ်တစ်ခုသည် အပိုင်းတစ်ခုစီကို အချိန်ဇယားဆွဲရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်၊ ထုတ်ဝေရန်နှင့် ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နေ့မှ4နာရီအထိ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ချက်ချင်းပြန်မရဘဲ တစ်လကို ရက်အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးတာက အခုလောလောဆယ် ငါတတ်နိုင်တဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်ချက်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာ အများအပြားကို အလွန်အကျွံနှင့် တပြိုင်နက် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
Lixar၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
တစ်နေ့လျှင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်များနှင့် အီးမေးလ် မည်မျှရှိသည်ကိုပင် မပြောနိုင်ပါ။ အများစုမှာ မြှူဆွယ်မှုများ၊ အချို့မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများဖြစ်ပြီး၊ ကောက်ရိုးပုံတွင် အချို့သော ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဖောက်သည်များ၏ ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး စီစစ်ပြီး အချိန်ဇယားဆွဲဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မပြတ်ပါဘူး…။ ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်မှာ အမှုဆောင်လက်ထောက်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီဇိမ်ခံပစ္စည်းကို ထပ်ပြီးမျှော်လင့်နေပါတယ်… ဒါပေမယ့် လက်ထောက်တစ်ဦးကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက်လည်း အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ခံစားနေရတယ်။
တနေကုန်လုပ်နေသော ပလက်ဖောင်းများအတွင်း အလုပ်များ တိုးလာခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။ လွှမ်းမိုးသည်။ ပိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုအချို့ကတော့-
ကျွန်ုပ်တွင် စာသားအတိုင်း တုံ့ပြန်မှုများကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ဝင်စာပုံးကို နေ့စဉ်လိုလို မိုက်မဲသော မက်ဆေ့ချ်များဖြင့် ဖြည့်ပေးသော အေးမြသော ပြင်ပကုမ္ပဏီများတွင်၊ ၎င်းကို သင့်ဝင်စာပုံး၏အပေါ်ဆုံးသို့ ယူနေသည်… သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ပြန်လည်: ရှေ့ကပြောဖူးတယ်ထင်လို့ subject line မှာ။ ဘာမှ ပိုစိတ်ဆိုးစရာ မရှိပါဘူး… ဒါက အခု ကျွန်တော့် ဝင်စာပုံးရဲ့ တစ်ဝက်လောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ရပ်တန့်ရန် သူတို့ကို ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သည်နှင့်အမျှ၊ အလိုအလျောက်စနစ်များ နောက်တစ်ခု ထပ်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အရေးကြီးသော မက်ဆေ့ချ်များကို ကျွန်ုပ်၏ ဝင်စာပုံးသို့ ယူဆောင်လာနိုင်ရန် မယုံနိုင်လောက်စရာ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စမတ်စာတိုက်ပုံး စည်းမျဉ်းအချို့ကို အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်ုပ်ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် စွန့်လွှတ်သည့် ကုမ္ပဏီအချို့ ရှိပြီး၊ ထို့နောက် လူမှုကွန်ရက်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်ကို တိုက်ရိုက် မက်ဆေ့ချ်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများလည်း ရှိပါသည်။ ငါ့အီးမေးလ်ကို ရပြီလား။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ငါမင်းကို ပိတ်ဆို့ထားဖို့ သေချာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ မင်းရဲ့အီးမေးလ်က အရေးကြီးတယ်လို့ ငါထင်ရင် ငါတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်... နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ရေးတွေ မပို့တော့ဘဲ ငါ့မှာရှိတဲ့ ကြားခံတိုင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုယ်မတုံ့ပြန်နိုင်လို့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဒေါသထွက်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိသားစုတွေပါ။ ငါ့ဘဝဟာ အခုအချိန်မှာ ပြည့်စုံနေပြီး ဒါဟာ လုံးဝကို အံ့သြစရာပါပဲ။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်၊ အိမ်၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဝေမှုမှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်ဟူသောအချက်ကို တန်ဖိုးမထားမိပါ။ အခုပဲ ဖြန့်ဝေလိုက်နော်။ Calendly ကျွန်ုပ်၏ပြက္ခဒိန်တွင် အချိန်ကြိုတင်ထားနိုင်ရန် သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ပြီးတော့ ငါ့ပြက္ခဒိန်ကို ငါကာကွယ်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ စာသားမက်ဆေ့ချ်များကို စပမ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ ပိုများလာသည်ကို တွေ့ရတော့သည်... ဒေါသမထွက်အောင်ပင်။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသည် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအားလုံးတွင် အနှောက်အယှက်အရှိဆုံးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထံသို့ အေးခဲသော စာသားမက်ဆေ့ချ်သည် ကျွန်ုပ်အား သင်နှင့် ဘယ်တော့မှ စီးပွားရေးမလုပ်မိစေရန် သေချာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး... PFL ရဲ့ စစ်တမ်းရလဒ်အသစ်အရ
မန်နေဂျာသည် C-Level ဖြေဆိုသူများမှတဆင့် 2.5 ဆအထက် ရရှိသည်။သတ္တုရိုင်းများ အပတ်စဉ် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အီးမေးလ်များ ပျမ်းမျှ တစ်ပတ်လျှင် အီးမေးလ် 80 စောင် ဘေးထွက်မှတ်ချက်… တစ်ရက်မှာ အဲဒါထက် ပိုရတယ်။
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက လက်ခံရယူသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ပျမ်းမျှ အီးမေးလ် ၆၅ စောင်.
ဟိုက်ဘရစ်သမားများ လက်ခံသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အီးမေးလ် ၃၁ စောင်သာရှိသည်။.
ရာနှုန်းပြည့် ဝေးလံခေါင်သီသော အလုပ်သမားများ လက်ခံသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အီးမေးလ် ၁၇၀ ကျော်ရှိသည်။သာမန်အလုပ်သမားထက် အီးမေးလ် ၆ ဆကျော် ပိုပါတယ်။
ကျော် အားလုံးန်ထမ်းများ၏ထက်ဝက် အလုပ်တွင်ရရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုမိုးရှင်းဆက်သွယ်ရေး ပမာဏကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ C-level ဖြေဆိုသူများ၏ 80% သည် ရှုပ်ပွနေပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုမိုးရှင်းအရေအတွက်အားဖြင့် သူတို့လက်ခံရရှိ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တုံ့ပြန်သည်မှာ-
ရပ် - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် အေးသောအီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်များစွာရပါက၊ လူကို ရပ်တန့်ပြီး ၎င်းတို့၏ဒေတာဘေ့စ်မှ ကျွန်ုပ်အား ဖယ်ရှားရန် ပြောပါသည်။ အချိန်အများစုတွင်၊ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
တောင်းပန်မနေပါနဲ့။ - ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး"တောင်းပန်ပါတယ် ...“အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း တုံ့ပြန်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားရင်၊ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့နှင့် အချိန်ဆွဲထားကြောင်း မကြာခဏ သတိပေးသည့် ပေးဆောင်သည့် ဖောက်သည်များပင် ပါဝင်သည်။ အလုပ်အပြည့်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဖျက်ပစ်ပါ – တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ မက်ဆေ့ချ်များကို မကြာခဏ ဖျက်လေ့ရှိပြီး လူများစွာသည် ကျွန်ုပ်အား စပမ်းရန် ထပ်မံကြိုးစားခြင်းအား အနှောက်အယှက်မပေးကြပေ။
ရေစစ် - ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အခါမျှ မတုံ့ပြန်နိုင်သော ဒိုမိန်းများနှင့် သော့ချက်စကားလုံးများအတွက် ကျွန်ုပ်၏ဖောင်များ၊ ဝင်စာပုံးနှင့် အခြားသော ကြားခံများကို စစ်ထုတ်ပါသည်။ မက်ဆေ့ချ်တွေကို ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ တခါတရံတွင် အရေးကြီးသော မက်ဆေ့ချ်များ ရောထွေးနေပါသလား။ ဟုတ်တယ်... အိုး.
ဦးစားပေး - ကျွန်ုပ်၏ ဝင်စာပုံးသည် သုံးစွဲသူ၊ စနစ်မက်ဆေ့ချ်များ စသည်တို့မှ အထူးစစ်ထုတ်ထားသော စမတ်စာတိုက်ပုံးများ အတွဲလိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား တစ်ခုချင်းစီကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးပြီး တုံ့ပြန်နိုင်စေပါသည်။
မနှောင့်ယှက်ပါနှင့် - ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် Do Not Disturb ကိုဖွင့်ထားပြီး ကျွန်ုပ်၏ အသံမေးလ်မှာ ပြည့်နေပါသည်။ ဟုတ်တယ်... စာတိုပေးပို့ခြင်းမှလွဲ၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသည် အဆိုးရွားဆုံးသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးထံမှ အရေးကြီးသောခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ဟုတ်မဟုတ်ကို ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းစခရင်ကိုဖွင့်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးထံမှ အရေးကြီးသောခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သော်လည်း အခြားလူများကမူ ကျွန်ုပ်ကို မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကူညီရန် သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
ဤသည်မှာ သင်၏ အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆက်သွယ်မှုတွင် ကူညီပေးနိုင်သော နည်းလမ်း ရှစ်ခုရှိပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ရယူပါ - ၎င်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်ကြောင်း၊ အရေးတကြီး ခံစားနားလည်မှုနှင့် ၎င်းတို့အတွက် အဘယ်ကြောင့် အကျိုးရှိကြောင်း သင့်လက်ခံသူအား အသိပေးပါ။ “ငါ မင်းကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်…” ဆိုတဲ့ အလွတ်စာထက် ပိုဆိုးတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ငါဂရုမစိုက်ဘူး… ငါအလုပ်များနေပြီး မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ဦးစားပေးတွေအောက်ကို ရောက်သွားတယ်။
အလိုအလျောက်စနစ်ကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနှင့် - အချို့သော မက်ဆေ့ချ်များသည် လုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စွန့်ပစ်ထားသော ဈေးဝယ်လှည်းများသည် လှည်းထဲတွင် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနောက်ကျန်ခဲ့ကြောင်း တစ်စုံတစ်ဦးအား အသိပေးရန် သတိပေးချက်အနည်းငယ် လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မဆွဲပါနဲ့… အဲဒါတွေကို ဖောက်သည်တွေအတွက် နေရာဖယ်ပေးထားတယ်… တစ်ရက်၊ ရက်အနည်းငယ်၊ ပြီးတော့ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကြာတယ်။ သူတို့မှာ အခုဝယ်ဖို့ ငွေမရှိလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
မြျှောလငျ့ Set - သင်အလိုအလျောက်ပြန်လုပ်မည် သို့မဟုတ် နောက်လိုက်လုပ်မည်ဆိုပါက လူကို အသိပေးပါ။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အအေးမိသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမည့် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်မိပါက ယနေ့တွင် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် သူတို့ကို အသိပေးလိုက်ပါမည်။ ဒါမှမဟုတ် ငါအလုပ်ရှုပ်နေပြီး နောက်သုံးလပတ်ကို အခြေချပြီး သူတို့ကို ပြန်ရေးလိုက်မယ်။
စာနာမှုပြပါ။ - သူနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တိုင်း သူတို့မိသားစုမှာ ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ ဟန်ဆောင်တယ်လို့ ဟိုးအရင်ကတည်းက ကျွန်တော့်မှာ ဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူလုပ်နေတဲ့အရာက လူကို စာနာမှုနဲ့ လေးစားမှုကို ချိန်ညှိနေတယ်။ အသုဘအခမ်းအနားတွင် ဝေးကွာနေသူတစ်ဦးထံ အီးမေးလ်များကို အလိုအလျောက်ပေးပို့မည်လား။ ကျွန်တော်သံသယဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒါက သူတို့အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူတို့မှာ တခြားဦးစားပေးတွေ ရှိနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာပါ။
ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ။ - အရောင်းအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ တစ်စုံတစ်ဦးအား ပြောရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမ. ကျွန်ုပ်သည် အလားအလာများအတွက် လွန်ခဲ့သည့်လတွင် အီးမေးလ်အနည်းငယ်ရေးခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသည့် တစ်ခုတည်းသောအီးမေးလ်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အား အီးမေးလ်ဖွင့်ပြီး ၎င်းတို့သည် မလိုအပ်ကြောင်း ပြန်လည်ကြားသိရသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝန်ဆောင်မှုများ။ လူကို No ဟုပြောရန် ယဉ်ကျေးစွာခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ဝင်စာပုံးကို ရှင်းလင်းစေပြီး သင့်အား ဒေါသထွက်စေမည့်အလားအလာများကို အချိန်မဖြုန်းမိစေရန် ကူညီပေးပါမည်။
ရွေးချယ်စရာများ ကမ်းလှမ်းပါ။ - ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆက်ဆံရေးကို အမြဲတမ်းအဆုံးသတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါက တခြားနည်းလမ်း ဒါမှမဟုတ် တခြားအချိန်မှာ ထိတွေ့ဆက်ဆံချင်နိုင်တယ်။ လ သို့မဟုတ် သုံးလပတ်အထိ နှောင့်နှေးခြင်း၊ ချိန်းဆိုမှုအတွက် သင့်ပြက္ခဒိန်လင့်ခ်ကို ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့သော သင့်လက်ခံသူကို အခြားရွေးချယ်စရာများကို ကမ်းလှမ်းပါ။ သင်နှစ်သက်သော ကြားခံ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းသည် ၎င်းတို့အတွက် မဟုတ်ပေ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရယူပါ။ - ပိတ်ဆို့မှုများ ရပ်တန့်သွားပြီး ခရီးသွားလာမှု ပွင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဆက်သွယ်ရေးသည် လူသားတို့ ထိထိရောက်ရောက် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည့် ခံစားချက်အားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည့် လူနှင့်လူချင်းတွေ့ဆုံရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သော ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုသည် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများမှတစ်ဆင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
Direct Mail ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ - တုံ့ပြန်မှုမရှိသော လက်ခံသူထံ ပိုမိုဝင်ရောက်လာနိုင်သော ကြားခံများထံ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည် လမ်းကြောင်းမှားနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်မေးလ်ကဲ့သို့သော passive ကြားခံများကို သင်ပိုမိုကြိုးစားခဲ့ပါသလား။ ကုမ္ပဏီများစွာက ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းမယူသောကြောင့် တိုက်ရိုက်မေးလ်ဖြင့် အလားအလာများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ရန် ကုန်ကျစရိတ် အလွန်အကျွံမရှိသော်လည်း၊ သင်၏တိုက်ရိုက်မေးလ်ကို အခြားတိုက်ရိုက်မေးလ်အပိုင်းအစ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော စာတိုက်ပုံးထဲတွင် မြှုပ်နှံထားမည်မဟုတ်ပါ။
အခြေအမြစ်မရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပေါက်ကွဲမှုများကဲ့သို့ မကြာခဏဆိုသလိုပင် သုံးစွဲသူများက ပစ်မှတ်ထားတိုက်ရိုက်မေးလ်ကို ညံ့ဖျင်းစွာ လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း၊ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ထားသော တိုက်ရိုက်မေးလ်သည် စစ်မှန်သောအမှတ်ရစရာနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အလုံးစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတွင် ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါ၊ တိုက်ရိုက်မေးလ်သည် ကုမ္ပဏီများကို ပိုမိုကြီးမားသော ROI မောင်းနှင်ရန်နှင့် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်ဖောက်သည်များအကြား အမှတ်တံဆိပ်ရင်းနှီးမှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
PFL ၏ CEO ဖြစ်သူ Nick Runyon
လူတိုင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကြုံတွေ့နေရသည်။
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းတွင်၊ အထင်ကြီးစရာများ၊ ကလစ်များနှင့် စိတ်ကိုမျှဝေခြင်းအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ပြင်းထန်သည်။ အားကောင်းပြီး နေရာအနှံ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိရိယာများ ပိုမိုများပြားလာသော်လည်း၊ လုပ်ငန်းများစွာသည် ဖောက်သည်များနှင့် အလားအလာများကြားတွင် ဆွဲငင်အားရရှိရန် ရုန်းကန်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ကုမ္ပဏီများစွာသည် ပရိသတ်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းယူရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်ရန် PFL သည် US အခြေစိုက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင် 600 ကျော်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ PFL ၏ရလဒ်များ 2022 စပ်ဟပ်သော ပရိသတ်ပါဝင်မှု စစ်တမ်း တိုက်ရိုက်မေးလ်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများသည် မီးလောင်ကုန်သော ပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန် အမှတ်တံဆိပ်များ၏ အရည်အချင်းများအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Infographic ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
US အခြေစိုက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင် 600 ကျော်၏ စစ်တမ်းမှ အဓိက တွေ့ရှိချက်များ ပါဝင်သည်။
လုပ်ငန်းဝန်ထမ်း၏ ၅၂.၄ ရာခိုင်နှုန်း ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပမာဏ မြင့်မားမှုကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကြုံတွေ့နေရသည်။
C အဆင့်ဖြေဆိုသူများ၏ 80% နှင့် တိုက်ရိုက်အဆင့်ဖြေဆိုသူ 72% တို့က ၎င်းတို့ကိုညွှန်ပြသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဆက်သွယ်ရေး ပမာဏကြောင့် ရှုပ်ပွနေပါသည်။ အလုပ်မှာ လက်ခံတယ်။
၅၆.၈% သည် စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးလ်မှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိသောအရာကို ဖွင့်နိုင်ခြေပိုများသည်။.
ယနေ့ခေတ် အာရုံစူးစိုက်မှု စီးပွားရေးတွင်၊ ပရိသတ်များကို ဖမ်းစားနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ရယူနိုင်စွမ်းသည် ရှားပါးသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် လူများစွာအတွက် လက်တွေ့ကျသည့်အချက်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် သုံးစွဲသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လှုံ့ဆော်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသုတေသနပြုချက်သည် ယနေ့ခေတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခင်းအကျင်းနှင့် ဖောက်သည်များနှင့် အလားအလာများကို ပေါ်လွင်စေရန် ကုမ္ပဏီများသည် ဟိုက်ဘရစ်ဗျူဟာများကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကို အလင်းပြပါသည်။
ဤသည်မှာ ဆက်စပ်စစ်တမ်းရလဒ်များပါရှိသော infographic အပြည့်အစုံဖြစ်သည်-
ထုတ်ဖော်: ငါငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် Calendly ဤဆောင်းပါးတွင်ပါ။
Tags: 2022ရက်ရက်စက်စက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။ဒစ်ဂျစ်တယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။တိုက်ရိုက်မေးလ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစစ်တမ်းပေါင်းစပ်ပရိသတ်ပါဝင်မှုစစ်တမ်းinfographiclixarစျေးကွက်ရှာဖွေရေးpersonalizationစိတ်ကြိုက်တိုက်ရိုက်မေးလ်စိတ်ကြိုက်မေးလ်pflရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဂိမ်း-ပြောင်းလဲခြင်း SEO အကြံပြုချက်များ 6- ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လစဉ်လာရောက်သူ 20,000+ သို့ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးလာပုံ